Khilaaf Qabyaaladaysi Ku Dhisan Oo Soo Kala Dhaxgalay Madaxda Dowladda Federaalka iyo Sanbaloolshe oo Wasiir Aflagaadeeyay WARBIXIN.
Wednesday June 28, 2017 - 09:59:09 in Wararka by Super Admin
Ismariwaa dhanka maamulka ah ayaa ka dhax taagan mas'uuliyiin sarsare oo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya ee wada shaqeynta laleh shisheeyaha dalka kusoo duulay.
Sawir Hore Sanbaloolshe iyo Gaafoow
Max’med Cabdullaahi Sanbaloolshe oo ku magacaaban Taliyaha Sirdoonka iyo wasiirka Amniga ayay xaalad adag oo wadashaqeyn la’aaneed ka dhax taagantahay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Sanbaloolshe iyo Islaaw ay isweydaarsadeen Erayo kulul kadib markii ay isku qabteen arrimo ku aaddan sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho, Sanbaloolshe ayaa Aflagaado iyo Handadaad isugu daray Islaaw arrinkaas oo khilaafka labada nin cirka kusii shareeray.
Sanbaloolshe ayaa wasiirka ammaanka ku eedeeyay in uusan ka amar qaadan taliska Nabad sugidda islamarkaana uu si gaar ah u maamusho howllaha amniga.
Max’med C/llaahi Farmaajo ayaa la sheegay in maalintii Axadda uu labada Nin ku kulmiyay madaxtooyada si khilaafka loo qaboojiyo, wararka ayaa intaasi ku daraya in Sanbaloolshe uu qoonsaday udhega nuglaashiyo uu Islaaw umuujiyay siyaasiyiin iyo odayaal kasoo jeeda beelaha ugu awoodda badan Muqdisho taas oo ku aaddan in la hakiyo hubka dhigista sida gaarka ah looga wado gobolka Banaadir waxaana tallaabadaas kasoo horjeestay Sanbaloolshe oo khiyaano qaran ku tilmaamay!.
Warar madax banaan waxay sheegayaan in Sanbaloolshe oo caan ku ah aflagaado uu caay hawada umariyay qaar katirsan beelaha magaalada Muqdisho waxaana jira kulamo dhaxmaray Muuse Suudi iyo xildhibaano katirsan labada gole oo ay uga arrinsanayaan caga jugleynta uga imaanaysa Sanbaloolshe.
Siyaasiyiin horay xilal ugasoo qabtay dowladda Federaalka oo hubkooda ula baxsaday gobollada Sh/Hoose iyo Sh/dhexe ayaa dhankooda wada olole ka dhan ah Sanbaloolshe iyo Kheyrre waxayna taageera u muujinayaan wasiir Islaaw oo ay u arkaan Nin fahamsan qaddiyadda beelaha ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Qabyaaladeysi iyo Nin tooxsi midkii ugu darnaa ayaa la sheegay in uu ka dhax aloosanyahay madaxda dowladda Federaalka tan iyo markii degmooyinka gobolka Banaadir uu ka bilaawday Howlgalka loogu magac daray ‘Xasilinta Caasimadda’.
Dadka Odorosa arrimaha siyaasadda DF-ka ayaa aaminsan in huka dhigista uu ku dhaqaaqay maamulka Farmaajo uu kala qeybsanaan cirib xun reebta uu ku yeelan doono Heykalka dowladnimo ee Kooxda Villa Somalia.
Warar laysla dhaxmarayo ayaa sheegaya in saraakiisha ugu sarraysa Melleteriga iyo Booliska DF-ka ay saluugsanyihiin howlgalkan ayna u arkaan mid qabiil gaar ah lagu beegsanayo ujeedkuna yahay in Sacbooley laga dhigo.
Waxaa xusid mudan in Axmed Daaci iyo dagaal Oogayaal hore ay diideen hubka dhigista ayna shardi uga dhigeen in marka hore hubka ladhigo Xarakada Al Shabaab! Arrinkaas oo xujo lafuri waaye ku noqotay Kheyrre iyo Farmaajo.
Dowladda Itoobiya Oo Qorsheynaysa in Ay Qaaddo Xaaladda Bandawga Ah Ee Waddanka Lagusoo Rogay.
Wargeyska Charlie Hebdo Oo Aflagaadeeyay Gabar Muslimad Faransiis Ah.
Raxan Dameera Ah Oo Khilaaf Ka Dhax Abuuray Dowladaha Burundi iyo Faransiiska.